MUUQAAL-Wasiirka Warfaafinta”21-ka bishaan waxa ay ku beegantahay ee afka hooyo munaasabad lagu weyneynayo afka hooyo ayaa laqaban doono “Sawirro” – Radio Muqdisho
kaddib Kulanka dhacay Magaalada Muqdisho oo ay wada qaateen qaar ka mid ah madaxda Warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta uu ugu horeeyo wasiirka cusub ee Wasaaradda Warfaafinta, Wasiir kuxi-geenka Wasaaradda,Wasiiru Dowlaha Warfaafinta Agaasimaha guud,, Agaasimaha Warbaahinta Qaranka,kaasi oo uu jeedkiisu ahaa kulan isbarasho iyo sidii wada shaqayn u dhexmari lahayd mas’uuliyiinta Wasaaradda iyo Warbaahinta Madaxa Bannaan.
Agaasimaha Wasaaradda Warfaafinta Hidaha iyo dalxiiska Mudane Cabdirisaaq Cali Yuusuf Bahlaawi ayaa sheegay in sanadkii la soo dhaafay uu aad u wanaagsanaa xiriirka Wasaaradda Warfaafinta ay la leheed Warbaahinta Madaxa Bannaan, isagoo tilmaamay in loo baahanyahay in la horkeeyo sharciga Saxaafadda Baarlamaanka Soomaaliya si ay u meelmariyaan.
Qaar ka mid ah madaxda Warbahinta madaxa Bannaan oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ay la shaqayn doonaan mas’uuliyiinta Wasaaradda Warfaafinta Hidaha iyo Dalxiiska.
Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Warfaafinta Hidaha iyo Dalxiiska Mudane Maxamuud Cabdi Xasan ayaa sheegay in Warbaahinta gaarka looga baahanyahay in ay la yimaadaan wadashaqayn wacan oo ay la yeeshaan madaxda wasaaradda isagoo sheegay in la abaalmarin doono warbaahinta ugu shaqada wanaagsan.
Ugu dambayn Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Warfaafinta Hidaha iyo Dalxiiska Mudane Maxamad Cabdi Xayir Maareeye oo hadal goobta ka jeediyay ayaa sheegay in 21-ka bishan ay ku beegantahay maalinta caalamiga ah ee afafka adduunka, isla markaana munaasabad lagu weyneynayo afka hooyo lagu qaban doono Muqdisho, taasi oo ahmiyad weyn u leh in gudaha caasimadda lagu qabto oo ay ka so qeyb geli doonaan madax kala duwan.
Sawir Qaade Farxaan Sulaymaan Daahir